NTLDR ပျောက်နေ - WINDOWS ကို - 2019
အစား Windows ကိုသငျသညျ NTLDR ပျောက်နေမှားယွင်းမှုတစ်ခုကိုမြင်ရလျှင်အဘယ်အရာကို
မကြာခဏပြုပြင်ကွန်ပျူတာများမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသွားအောက်ပါပြဿနာကိုဖြည့်ဆည်း: ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလှည့်ပြီးနောက်, operating system ကိုစတင်ပါမအစား, ကွန်ပျူတာ screen ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ်:
NTLDR ပျောက်နေထိုအခါအဆိုပြုချက်ကိုနှိပ်ဖို့ Ctrl +, Alt, Del ။
အဆိုပါအမှား Windows XP ကိုအဘို့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အများကြီးနေဆဲဒီ OS ကို install လုပ်ထားကြပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကိုသင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်ငါဘာလုပ်ရမှန်းအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ hard drive ကို, ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့မှားမှာ Windows Boot တက်ကဏ္ဍနှင့်အတူပြဿနာကိုမလျော်ကန်သောပိတ် - အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။ ရလဒ်အဖြစ်စနစ်ဖိုင်ကိုရယူမနိုင် ntldrဘယ်ကြောင့်အက၎င်း၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ထိုမရှိခြင်း၏သင့်လျော်တင်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။
bug တွေကို fix လုပ်နည်း
သူတို့ကိုသင်နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, OS ကိုသင့်လျော်တင်ပြတင်းပေါက် restore လုပ်ဖို့အများအပြားနည်းလမ်းများကိုသုံးနိုင်သည်။
1) ntldr ဖိုင်ကိုအစားထိုးပါ
ပျက်စီးသွားသော file ကိုအစားထိုးရန်သို့မဟုတ် restore လုပ်ဖို့ ntldr သငျသညျတူညီသော operating system ကိုအတူသို့မဟုတ် Windows နှင့်အတူတပ်ဆင်ခ disk ထဲကအခြားကွန်ပျူတာကနေကူးယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖိုင် operating system ကိုအတူ disc ကို၏ i386 folder ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းတူညီသော folder ထဲမှာ ntdetect.com ဖိုင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Live CD ဒါမှမဟုတ် Windows ကို Recovery Console ကနေတဆင့်အဲဒီဖိုင်တွေထဲမှာသင့် system drive ကိုအမြစ်မှကူးယူခံရဖို့။ ထို့နောက်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါသင့်ပါတယ်:
Windows ကိုအတူ installation CD ကနေ boot
သငျသညျသတိပေးခံရနေတယ်ဆိုရင်, စာနယ်ဇင်း R ကိုလုပ်ဖို့ Recovery Console ကိုစတင်ရန်
အမိန့် cd c ကို :) အတူ (ဥပမာက boot hard disk ကို partition ကိုသွားပါ။
fixboot command ကို (အတည်ပြုချက်ကို Y ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်များအတွက်) နှင့် fixmbr run လိုက်ပါ။
အောင်မြင်သောပြီးခဲ့သည့် command ကိုပြီးစီး, type ကိုထွက်ပေါက်များနှင့်ကွန်ပျူတာ၏အသိပေးစာအပေါ်သို့ error message ကိုမပါဘဲပြန်လည်စတင်ရန်သင့်ပါတယ်။
2) စနစ်တစ်ခု partition ကို Activate
ဒါဟာဤကိစ္စတွင်အတွက်က Windows, ဒါကြောင့်, ဖိုင်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဲဒါကို access ကိုရမရနိုငျသညျ, ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များစွာပေါ်စနစ် partition ကိုမရှိတော့တက်ကြွဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပျက် ntldr။ ယင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘယ်လိုနေသလဲ?
boot ထိုကဲ့သို့သော Hiren ရဲ့ Boot တက် CD ကိုအဖြစ်မဆို Boot တက် disk ကို အသုံးပြု. နှင့် hard disk ကို partitions ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အစီအစဉ်ကို run ။ Active ကို tags များအဘို့စနစ် disk ကိုစစ်ဆေးပါ။ တက်ကြွအောင် - partition ကိုတက်ကြွစွာသို့မဟုတ်ဝှက်ထားမပါလျှင်။ reboot ။
Windows အပြန်လည်ထူထောင်ရေး Mode သို့ boot အဖြစ်ပထမဦးဆုံးအပိုဒ်၌တည်၏။ အဆိုပါ fdisk command ကိုရိုက်ထည့်ပါ, pop-up menu ကို, အတက်ကြွ partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုအပြောင်းအလဲများကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
3) boot.ini ဖိုင်အတွက် operating system ကိုမှအသံဖမ်းပုဒ်၏မှန်ကန်မှုကို Check
ဗီဒီယို Watch: How to fix NTLDR IS MISSING BOOTABLE USB WINDOWS7(အောက်တိုဘာလ 2019).